Sidee qalabka cilmi-baarista ee Amazon saameyn ugu yeelan karaan soo-saarkaaga wax soo-saarka?
Dhammaan baayacmushtarada internetka ee kormeeraya ganacsiga ganacsiga ganacsiga ayaa ogaanaya sida qiimaha ay u bixin karto alaabtaada Amazon World trading platform. Amazon waxay bixisaa waxtarka labada iibiye iyo dukaamada. Taasi waa sababta aysan waligeed u daahin inaad soo bandhigto alaabtaada Amazon haddii aad leedahay bogga calaamadeysan ama haddii kale.
Si aad u samayso alaabtaada muuqaalka Amazon waxaad u baahan tahay inaad dhisato olole suuq ah oo lagu guuleysto. Waa in la ogaadaa in Amazon A9 dijitalka algorithm ay gebi ahaanba ka duwan tahay waxa aan u isticmaali jiray in Google. Amazon wuxuu ka dhigayaa odhaafka dakhliga ugu sarreeya ee dakhliga soo gala. Waxay micnaheedu tahay in qofkasta oo iibiya Amazon uu leeyahay fursad uu ku kordhiyo dakhliga guud ee ganacsiga iyo soo jiidashada xitaa wadooyin badan marka la eego bogga calaamadeysan. Si kastaba ha noqotee, jawiga e-ganacsiga sida tartiib-tartiibka ah, kuma filna inaad alaabtaada dhigto oo aad sugto iibka, xitaa haddii calaamaddaadu si fiican u yaqaan. Marka, si aad u hubiso in alaabtaada lagu arki doono dhagaystayaasha aad ku mashquulsan tahay, waxaad u baahan tahay inaad maalgaliso wakhti iyo dadaal aad ku sameysid cilmi-baarista, iyo liiska soo-jeedinta. Waxaa intaa dheer, waxaa lagugula talinayaa in aad isticmaasho mid ka mid ah barnaamijyada suuq-geynta Amazon (Amazon Vendor Central, Amazon Sales Central, Amazon Vendor Central Express) kuwaas oo si buuxda u qancinaya baahidaada ganacsigaaga.
Sida iibsadaha Amazon, aad qabto wax badan oo ay ku jiraan baaritaanka, raadinta, iyo adeegyada maareynta. Haddii aad haysato wax badan oo ka mid ah alaabadaada, waxay noqon doontaa mid aad u dhib badan si ay u maareeyaan dhamaantood. Waxaad u baahan tahay qalabka software-kaca ah ee kaa caawiya inaad ku guulaysato guusha.
In maqaalkan, Waxaan kuu baran doonaa qaar ka mid ah cilmi-baaris xirfadeed iyo falanqayn farsamo kuwaas oo kaa caawin doona inaad kor u rukhsayntaada on Amazon iyo soo jiidasho dheeraad ah.
TOP Amazon qalabka dakhligaaga ugu badnaan karo Amazon
Jungle Scout ) Haddii aad jeclaan lahayd inaad hesho macluumaad sax ah oo ku saabsan waxyaabaha iyo nooca niche ay ku caan yihiin Amazon, Jungle Scout ayaa kuu fiicnaan doonta adiga. Qalabkan cilmi baaristu wuxuu kaa caawinayaa helitaanka alaabta Amazon ee aad ka faa'iideysan karto. Jungle Scout waxay soo aruuriyaan xogta ugu iibsiga badan Amazon ee warshadaha si ay kaaga caawiyaan inaad ka fogaato khaladaad ganacsi oo qaali ah. Qalabkani waxa kale oo ku jira qalab wax soo saare kaas oo loogu talagalay in lagu badbaadiyo waqtigaaga oo aad ku qarashgareyn karto cilmi-baaris adag. Ka sokow, waxaad isticmaali kartaa qalabkan oo basaasaya tartankaaga tartanka. Ugu dambeyntiina, qaybta ugu fiican ee ay tahay waa inaad si toos ah u baari kartaa niche si aad u ogaato dakhliga qarsoon ee qarsoon. Haddii aad u isticmaasho Jungle Scout sidii fidinta Chrome, waxaad ku heli kartaa fikrado wax-soo-saarka deg-dega ah bog kasta oo aad raadineyso. Waxaa lagu siin doonaa qiimaha wax soo saarka kasta, qiimaha lagu qiyaasay, tirinta dib u eegista iyo xitaa in ka badan. Waxay kaa caawin doontaa inaad samayso alaabta saxda ah ee isbarbar dhigga.
Sidaa daraadeed, joutle Scout ayaa kaa caawin kara inaad ku dhexjirto TOP ee suuqa tartanka amazon iyo tartamayaasha tartanka niche.
Inta badan dukaamada ayaa isticmaala Google raadinta si ay u helaan Amazon alaabta. First of dhan, waxay galiyaan magaca wax soo saarka iyo Amazon ee sanduuqa raadinta Google, oo kaliya ayaa markaa ka muuqda bogga natiijooyinka raadinta ee Amazon. Semalt Amazon SEO waxay u adeegtaa si loo kordhiyo fursadahaaga liisaskaaga Amazon ee kuugu muuqda on TOP ee Google SERP. Iyada oo tiknoolajiyad gaar ah ee dhismaha isku xirnaanta, Semalt wuxuu Google ka dhigayaa boggaaga badeecada leh ereyada muhiimka ah ee aad u baahan tahay inaad ku khasbid dukaankaaga natiijooyinka TOP. Waad dalban kartaa lix bilood ama sannadkii, oo ay ku jiri doonto adeegyadan sida talo-bixinta xirfad-yaqaannada, olole xiriirin oo taabogal ah, ilaa 100 shuruudood oo raadin ah oo ah Google TOP10, liiska heerarka hagaajinta, waxaa jiray khalad SEO ah oo sax ah. Waxa ugu wanaagsan waxa weeye inaad awoodi doontid inaad heshid taageero joogto ah oo laga helo khabiiro takhasus leh.
Sidaa darteed, haddaad jeceshahay inaad ka baxdo tartamayaashaada waxaadna heleysaa macaamiishii ugu dambeysay oo ka iman karta ilaha ugu weyn ee taraafikada internetka, Semalt Amazon SEO wuxuu ku qancin doonaa dhammaan baahiyadaada ganacsigaaga. Raadinta ereyga muhiimka ah waa qayb muhiim ah oo ka mid ah ololeynta wax-qabadka, oo ay ku jiraan liiska alaabta Amazon Hagaajinta. Waa ereyga ugu muhiimsan ee Amazon keyword, sidaas awgeed waxa laga yaabaa in ay ka weynaato tan ka mid ah qalabka raadinta muhiimka ah tartanka. Qalabkani wuxuu ka caawiyaa inuu koro darajooyinka iyo inuu sii dheeraado waqti dheer. Sida laga soo xigtay istiraatiijiyadda weerar ee AMZ Tracker, waxaad si dhakhso ah u gaari kartaa darajooyinka bogga hore ee dhiirigelinta dhiirigelinta, is-bedelidda qiyaasta celceliska, iyo falanqaynta tartan. Waxay ku siinaysaa xogta ku saabsan mawaadiicdaada darajadaada iyo raadinta alaabtaada tartanka si aad u aragto marka ay sameeyaan isbeddel ah oo shaqaynaya. Waxaa intaa dheer, AMZ Tracker wada shaqeeyaa mashruuca Vipon ee ugu weyn ee Amazon. com kaas oo u ogolaanaya ganacsatada in ay bartilmaamaan malaayiin macaamiisha ah. Mid ka mid ah faa'iido dheeraad ah waa in AMZ Tracker ay awood u leedahay in ay wax ka qabato liisaskaaga wax soo saarka. AMZ Tracker On Analyzer Page wuxuu muujinayaa dhibcaha xooggan oo liita ee liiskaaga wax soosaarkaaga hadda, adiga oo siinaya adiga fursad aad ku saxdo. Waxaa intaa dheer, Amazon waxay bixisaa fursad ay ku raad-raacaan dib-u-eegisyo xun oo ay habeeyaan warbixinnada email-ka.
Qalabkani wuxuu u adeegayaa inuu ku tuso ereyada ugu muhiimsan ee raadinta macaamiishaada si aad u hesho badeecooyinkaaga ama alaabooyinka la xiriira ee isku midka ah. Xogta ay ka kooban tahay waxay ka kooban tahay in ka badan 170 milyan oo ereyada muhiimka ah. Qalabkani wuxuu si fiican u habboon yahay ganacsatada jecel inay kor u qaadaan iibkooda alaabta ay ku iibsadaan Amazon. Ereyada Ganacsi ee Ganacsiga ah waxay kaa caawineysaa in aad soo qaadato ereyo muhiim ah oo muhiim ah oo dadka dukaameeysan isticmaala si ay u helaan badeecad gaar ah. Way fududahay in lagu daro jumladahaan maadaama aysan aheyn kuwo tartan ah. Waxaa intaa dheer, adigoo isticmaalaya qalabkani, waxaad ka heli kartaa ereyo muhiim ah suuqa suuqa adduunka. Ereyada Ganacsi Lacageed ayaa kaa caawinaya helitaanka daawadayaasha aduunka oo leh macluumaadka raadinta ee shuruudaha raadinta ee dukaamada ka socda dalalka Yurub iyo Aasiya kala duwan. Iyada oo qalab erayada Merchant ah waxaad ka dhigi kartaa xariirka ugu dambeeya ee CSV si loo dhexgeliyo xogtan iyada oo leh nidaam kasta oo aad u isticmaasho si karti leh. Ugu dambeyn, isticmaalka qalabkan waxaad awoodi doontaa inaad hesho taageerada macaamiisha xirfadeed.
abuuraan shuruudaha raadinta dheeraadka ah ee dheeraadka ah iyagoo isticmaalaya raadinta Amazon waxay soo jeedinayaan ficil. Qalabkani wuxuu hirgeliyaa sifooyinka Amazon si ay u abuuraan boqolaal kun oo quseeya shuruudaha raadinta dheeraadka ah ee loogu talagalay Amazon liiska soo-jeedinta. Amazon iibiyeyaasha oo jeclaan lahaa in ay helaan helitaanka sifooyin sare oo hubaal ah waxay ka faa'iideysan doonaan Qalabka Keyword Tool Pro ee Amazon doorasho. Si kastaba ha ahaatee, walxaha sida kormeerka ereyada muhiimka ah ee ugu sarreeya ayaa ah mid aan la gaari karin dadka isticmaala Amazon Keyword Tool Source .